OROMIYAAN – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Mirgi~Ummata Oromoo Guutuutti Hamma Mirkanaawu Fincilli Xumura Gabrummaa Itti Fufa!! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Mirgi-Ummata Oromoo Guutuutti Hamma Mirkanaawu Fincilli Xumura Gabrummaa Itti Fufa!
File– In this file photo of June 10, 2005, Members of the Ethiopian army patrol the streets of Addis Ababa, Ethiopia, after recent clashes with protesters. Violent weekend clashes between protesters and security forces have claimed the lives of more than a dozen people across Ethiopia. The government announced Sunday evening that seven protesters died in the northern Amhara region’s capital, Bahir Dar. Witnesses who spoke to The Associated Press anonymously for fear of reprisals said anti-riot police also used force Saturday to disperse hundreds of protesters in the capital, Addis Ababa.(AP Photo/Karel Prinsloo, file)
Naqamte keessatti sa’atii ammaallee Qeerroo Bilisummaa Oromoo FXG Ittuu Jabeesse
ONN Gurraandhala 25,2018 galgala edaa ofumaan jeequmsa hammaataa kan uumaan waraanni TPLF halkan guutuu uummata nagaa dhorkataa bulan. Qeerroo Bilisummaa Oromoo sirboota warraaqsaan halkan guutuu biyyasaa eeggataa bule. Dargaggeessi martuu magaalaa eeggachaa bulan.
Badii tokoon alatti waraanni wayyaanee gara ganamaa naannoo Boordii jedhamutti dargaggoota 3 qabatanii reebichi hamaan irra dhaqaabe. Dargaggeessi dhalootaan ona baadiyyaa Naqamtee Giddaa ta’es du’aaf jireenya jidduu galuusaa gabaasan. Halkanuma edaammoo naannoo Mooraa Yuunibarsiitii wallaggaatti shamarree ammaaf maqaa hinargatin irra balaan reebicha hamaa dhaqaabe. Namoonni kurnootaan lakkaa’aman dhiiganiiru. Jaarsolii utuu hinafin reebichi hammaataan dhaqaabe.
Barii ganama har’aa jalqabee hanga ammaatti immoo dhukaasa gurguddaan magaalaa goolaa jiru. Humnatti fayyadamuuf dhukaasi gaafa eegalu Qeerroon ijaarsa ijaarsaasaatii bakka bakkatti daandii cufuun wareegama namaa hanbisuurratti hojjetaa jiru.
Magaalaa Naqamtee guutummaatti hojiin kamuu dhaabbateera. Magaalaa Naqamtee qofa utuu hintaane duddaa jabaan guutummaa Wallaggaa keessaa fiinaa jiraachuutu himame. Tooruma kanaan Billoo Boshee guutuun guutuutti daandiin keessaa cufameera, Aanaa Waamaa Hagaloo keessaattis Billoo Bosheerraa qabee hanga laga Madaaluutti daandiin cufamuu gabaasan
Haalli biyyattii yaaddeessaa ta’uu mirkaneeffanne. Haalli biyyattii dirree waraanaatti jijjiiramaa jira. Uummanni obsa fixateera. Qeerroo Bilisummaa Oromoo waraqaa diddaa agarsiisu kan waraana balaaleffatu uummataa raabsaa bule
Haalli Obbo Baqqalaa Garbaafaa maalirra gahe? iyyaafaannee deebina
On February 16, 2018 the Ethiopian government has again declared a State of Emergency for six months. This came only months after the earlier state of emergency under which the population of Ethiopia suffered for ten months This State of Emergency was declared a day after the surprise resignation of the Prime Minister Hailemariam Desalegn from his post on February 15, 2018
US Embassy-Oduu Gur.18/2018
Sirni Abbaa Hirree Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa baatii 6’f turu labsachuun, biyyattii bulchiinsa komand-postii, humna waraanaan hoogganamu jalatti bulchuuf murteeffachuunsaa battala dhaga’ame irraa eegalee, biyya keessaa fi alaa mormiin jabaan irratti dhaga’amaa jiraachuun beekameera.
Qaamolee adda-durummaan labsii yeroo muddamaa sirni abbaa hirree biyyattii labsate kana morman keessaammoo Imbasiin United States Finfinneetti argamu isa tokko.
Imbasiin United States dhimmicha ilaalchisuun ibsa kaleessa baaseen, rakkoolee biyyattii mudatan furuuf labsii yeroo muddamaa labsuun furmaata hin ta’u jedhe.
Rakkoon biyyattii keessatti mul’atu nuunis nu yaaddessa, rakkoolee mudatan furuuf garuu walabummaa lammiilee dhugoomsuu malee, walabummaa mulqachuun fala mitis jedheera ibsi Imbaasichaa.
Labsichi mirgoota bu’uuraa kanneen akka mirga walitti qabamuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu lammiilee kan ugguru ta’uus eeruun,Tarkaanfii mootummaan Itiyoophiyaa fudhate cimsee kan mormu ta’uu ibseera.
Rakkoolee biyyattii mudataniif uggura osoo hin taane marii fi adeemsa siyaasaa hunda galeessa qaama mara hirmaachiseetu furmaataa jedhe.
Labsiin kun hidhamtoota siyaasaa hidhaatii gadi lakkisuu dabalatee tarkaanfilee dirree siyaasaa biyyattii bal’isuuf dhiheenya fudhatamuu eegalan gatii kan dhabsiisu ta’uus ibseera.
Mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhate kana irra deebi’ee akka ilaalu, rakkoo biyyattii maqsuufis marii fi adeemsa siyaasaa dirree dimokiraasii bal’isu irratti akka xiyyeeffatuuf hubachiiseera.
Ibsi imbaasichaa kun kan yeroo kamiiyyuu caalaa ejjennoon jabaan kan irraa mul’atudha jedhu xiinxaltoonni.
Kunis hariiroon jabaan United States Sirna Abbaa Hirree Itiyoophiyaa faana qabdu daran laaffataa dhufuusaa agarsiisa jedhan. Kun ta’uun ammoo kufaatii sirnichaa ariifachiisuu keessatti qoodni qabaatu salphaa hin ta’u.
Ministirri Raayyaa Ittisaa Itiyoophiyaa Siiraaj Fargeessaa ibsa Sanbata miidiyaaleef kennaniin, labsichi baatii 6’f kan turu ta’uu, barbaachisummaansaa ilaalamee baatii 4’f dheerachuu kan danda’u ta’uus dubbataniiru.
Itiyoophiyaan xumura baatii Onkoloolessaa bara 2016 irraa eegalee ji’oota 10’f labsii yeroo muddamaa jalatti bulaa turuunshee ni yaadatama.
Qabiyyee labsii bifa haaraan sirni biyyattii labsate irratti namoonni yaada kennan akka eeranitti, labsiin bifa haaraan dhufe kun kan duraaniirrayyuu ukkamsaadhaa jedhu.
Hojiirra oolmaasaa hoogganuun wal qabatees naannoleen keessatti qooda akka hin fudhanne taasifameera.
Gama biroon qophii labsichaa keessatti qoodni Mootummaa Naannoo Oromiyaa ifatti mul’achuu dhabuun gaaffii uumeera.
Labsichi Guutummaan guutuutti Olaantummaa Waraanaa fi Tika biyyattiin akka hoogganamu taasifamuun ammoo, biyyattiin bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti sodaa jedhu hordofsiiseera.
Ministirri Muummee Hayilamaaram Dassaaleny Aangoorraa ka’uun wal qabatee, qaamni biyyattii keessatti jijjiirama qabatamaa dhugoomsuu danda’u bakkichaaf osoo abdatamu, Aangoon olaanaa bulchiinsa biyyattii kun hogganoota waraanaa sirnichaan dhuunfatamuu danda’aanis sodaa qaamolee garaa garaa irraa dhaga’amaa jirudha.
Kun taanaan ammoo bulchiinsa sirna abbaa hirree kan biraa, kallattiin humna waraanaan hoogganamutu Itiyoophiyaa keessatti dhugoomuu danda’a yaadni jedhu bal’inaan dhaga’amaa jira.
Itiyoophiyaatti Ambaasaaddera United States kan turan Herman Cohen dhimma kana ilaalchisuun yaada kennaniin, Itiyoophiyaa keessatti osoo yaa’iin hundagaleessi qaama mara hirmaachise gara furmaataatti fidu eegamuu, Bulchiinsi Abbaa Hirree Humna waraanaan hoogganamu, kan biyyoota giddu gala bahaa biratti mul’atu dhugoomuu danda’a sodaa jedhun qabaa jedhan.
Kun ammoo biyyattiif kufaatii guddaadha; Mootummaan Ameerikaa Itiyoophiyaa keessatti Bulchiinsi Abbaa Hirree kan biraan humna waraanaan hoogganamu akka dhugoomuuf hayyamuu hin qabuun yaada Herman Coheni.
Labsiin yeroo muddamaa, Mana Maree Ministirootaatiin labsamuun himame kun, guyyoota 15’n booda Mana Maree Bakka Buutota Ummataatiif dhiyaata.
Labsiin kun dhiibbaan inni biyyattii irrattis ta’e hawaasa irratti qabaatu hubatamee mana marichaan kufaa taasifamuu qabaan yaada qaamolee hawaasa garaa garaa irraa bal’inaan dhaga’amaa jirudha.
Labsichi rakkoo jiruuf furmaata miti, Qabsoon hawaasaas Labsii kanaan hin dhaabbatuun ammoo yaada Dura Taa’aa Itti Aanaa Paartii KFO Obbo Baqqalaa Garbaati
via SBO: Gurraandhala 18, 2018. Oduu, Ibsa ABO Labsa Yeroo Hatattamaa Wayyaaneen baase ilaallatuu fi Haala Sochii Warraaqsa FXG irratti yaada Jiraattota Oromiyaa Godinaalee Adda addaa.
Yaadni koo silaa wal gahii guyyaa kudhanii booda beeksissa OPDO baasite kan ilaalu ture. Waan OPDOn geerartu dhagee ka’ee dhiisi maloo si itti bariitee jirtiijechuun barbaade. Utuu OPDOn jecha kana waggaa26 dura jettee jiraate anaanuu garaa na raafti. Ilma akkamitu Oromoo dhalate jedhee nan gammada ture. Har’a erga eenyumaa ishee xiqqaa fi guddaan Oromoo hubatee booda “hoogganna ijaarsa kee” dhuka dhaaphu yaroo jettu qaama kootu na suukanna’e. Bulchaa OPDO jalatti Oromoo akka balaa salphate. Gudataa fi guddatuun Oromoo kumaatan mana hidhaa keessatti waxxalamee dhume. Kumaatamaan ajjeefamanii irrbataa alattii fi bineesaa tahan. Biyya isaanii irraa ari’amanii gamoojii fi bishaan keessatti kan dhuman lakkobsa hin qaban. Kan qaamni hiratee fi maraate meeqatu jira.